Waxaan aad ula dhacay Riyada Prof Yaxye Sheekh Caamir | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waxaan aad ula dhacay Riyada Prof Yaxye Sheekh Caamir
Ma runbaa mise waa Riyo?
Haddii dable Janaraal noqday. Haddii ma shaqeeyste taajir noqday.Haddii Dr. iyo Eng. Naaneeys noqdeen, Haddii Gudoomiye Gobal madaxweeyne noqday. Haddii saqiir Agaasime noqday. Haddii nin waalan mas’uul noqday. Haddii kii isaga ahaa wasiir noqday. Haddii xertii Mufti noqotay. Haddii xubin maamul degmo xildhibaan noqday. Haddii xil la qabto xabashi iyo hanta ku xirmay. Haddii tuugii talye noqday. Haddii dambiilihii diblomaasi noqday waa col ku dhaccadaa wana kuu talisay . ma quusan Irid ALLA oodo ma saara.( waa ku wareeray, soon ayaan xirtay waana iska seexdaday).
WAAN RIYOODAY waxaankuriyooday :
1-shantii Soomaaliaya aamidowday, meel kasta hal calan oo hal xiddig leh ayaa ka taagan.
2-Wareegta ka soo baxday xafiiska Ra’isul wasaaraha ayaa lagu kala badalay qaar ka mid ah shaqaalaha Dowlada, waxayna u qorneyd sidan: Gudoomiyihii Gobalka Jigjiga waxaa loo bedelay Shabeelaha Dhexe, Gudoomiyaha degmada Madheera waxaa loo badalay Borame. Maamulihii dekeda Jabuti waxaa loo bedelay dekeda Kismayo. Gudoomiyaha degmada Hobyo waxaa loo bedelay Garisa, Gudoomiyaha degmada Cali sabiix waxaa loo bedelay Afmadow, Taliyihii saldhiga Boliska Afgooye waxaa loo bedelay Wajeer, Iskuduwihii Xanaanada Xoolaha Degmada Qoraxeey waxaa loo bedelay Degmada Qoryooley, Taliyihii nabad sugida Degmada Carte waxaa loo bedelay Garowe.
3- Dowlada Soomaaliya ayaa shaacisay in sanadkan ay qaabileyso 30.000 ruux oo ah qaxootiga koofur Bari Asiya, iyadoo lacagta cayrta ah ee dowladu bixiso la kordhinayo 40%.
4- Jaamacada Ummadda Soomaaliyeed ayaa go’aamisay in deeq waxbarasho la siiyo 200 arday oo ka imaanaya wadamada soo koraya.
5-Gudoomiyaha OPEC ayaa sannadkan loo doortay wasiirka Tamarta iyo Shidaalka ee Somalia .
6-Markabka diyaaradaha xambaarta ee HADRAAWI -1 oo ay la socdaan 6 markab ah ku xambaarta gantaalada riddada dheeriyo laba Gujisoo ay leeyihiin ciidamada Badda Soomaalidu ayaa gaaray xeebaha dalka imaaraadka Carabta si ay uga qayb galaan dhoolatus ay sameeynayaan ciidamada badda ee wadamada Carbeed.
7-Hay’ada SSA ( Somali Space Agency) ee hawada sare ayaa heshiis la gashay dhigeeda dalka Shiinaha in si wadajir ah ay isaga kaashadaan diridda dayax gacmeedka BAKOOL-2, oo laga gamayo Saldhiga cirifka gardafuuyee gobalka Bari ee Somaaliya waxaana sii raaci doonaan 5 cirbixiyeen oo Shiina ah iyo 2 Somali ah, kaa oo hawada sare ku maqnaan doona muddo 18 Bilood ah.
8-Warshada bacriminta Uraniyuumka ee Guriceel ayaa la balaariyay si ay u suurtagashao in tamar koronto oo ku filan ay gaarsiiso wadamada `Afrikada Bari.
Markii aan soo toosay waxaan kala garan waayay ma riyaa mise waarun.!
Ha quusan, noo duceey in riyadeeyda ALLAH nooga ruumeeyo, waxay ku xiran tahay oo kaliya annaga oo si wadajir ah u aamino inaan ka rumeeyn karno, una dhaqaaqno ALLANA ha nagu garabgalo, qadar ALLA lagama quusto.
Xor ayaad u tahay in aad fekerkeeyga naqdiso, wax ka bedesho, beeniso, ama si kale aad u dhigto.
WQ: Prof. Yaxya Sheekh Caamir
Previous articleHay’addda Hormuud Salaam Foundation oo wasaarada Caafimaadka iyo Maamulka Isbitalka Martini ku wareejisay 1,500 oo haamood oo Oksajiin ah .
Next articleMaxkamada aduunka oo billawday baaritaan la xiriiro dambiyada dagaal ee ka dhacay dhulka Falastiin.
Taliska Boliiska Baladweyne oo war ka soo saaray Dil la sheegqy...
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 15, 2021 0
Taliska saldhiga boliska magalada beledweyn aya kawar bixiyay faldambiyed xalay lagu dilay alle unaxariska macalin cumar macalin maxamuud oo kadhacay xafada xaawa taako magalada...
Dadkii ugu badnaa uu asiibay Cudurka Halista ee Karoone 19...
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland oo kulan la qaatay Hay’adaha garsoorka Jubaland.
Madaxweyne axmed Madoobe oo kulan muqdisho kula yeeshay Safiirka Itoobiya u...
Xuutiyiinta oo markale Balanqaaday in Boqortooyada Sucuudiga ay ulaba jibaari doonaan...
Ciidamada booliska degmada Kaaran oo soo qabtay rag la...
Komishinka Somaliland oo Goordhoweyd shaaciyay Natiijo hor dhac ah ee Goleyaasha...
Mohamed Abdullahi Mohamed - June 2, 2021 0